Timaha Afro-da Ah Ee Axel Witsel Oo Lagu Iibinayo Dukaanka Borussia Dortmund | Laacib.net
Timaha Afro-da Ah Ee Axel Witsel Oo Lagu Iibinayo Dukaanka Borussia Dortmund
February 6, 2019 Balaleti
Borussia Dortmund ayaa la timid hab cusub oo ay lacag ku sameyso iyagoo dukaankooda rasmiga ah soo dhigay burakada xiddigooda Axel Witsel.
Xiddiga reer Belgium ayaa u wareegay Dortmund xagaagii ka dib 18 bilood uu la joogay kooxda Shiinaha ee Tianjin Quanjian, waxaana uu durbaba noqday xiddig ay jecel yihiin taageerayaasha isagoo dhaliyay shan gool 19 kulan uu saftay.
Fure ayuu u yahay kooxda tababare Lucien Favre kuwaasoo todobo dhibcood ku haya hogaanka horyaalka Bundesliga, waxa uu sameeyay 1444 baasas xilli ciyaareedka horyaalka, halka sugnaanshaha baasaskiisa ay gaareen boqolkiiba 93 taasoo ka dhigeysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee ugu baasas sugnaanshaha badan ilaa iyo haatan horyaalka Jarmalka.
Dortmund ayaana si weyn u qiimeyneysa xiddigooda iyagoo haatan website-kooda ku iibinaya buruko loo ekeysiiyay timaha afro-da ah ee Axel Witsel.
Taageerayaasha ayaa isku dayi kara inay iska dhigaan xiddigii hore ee Benfica iyo Zenit iyagoo 9.95 euro ku iibsanaya burukada Axel Witsel.
Waxaa la saadaalinayaa in si weyn loo iibsan doono iyadoo dhawaan lagu arki doono garoonka Siganl Iduna Park dad badan oo iska dhigay Axel Witsel. Waxaase la yaab ah in Manchester United aysan fursad ceynkaan oo kale ah uga faa’ideysanin Marouane Fellaini ka hor inta uusan ku biirin Shandong Luneng isbuucii la soo dhaafay.
Dhanka kale Witsel ayaa ka cabanayay ciyaar gacmeedka FIFA 19, inkastoo timahihiisa Afro-da ah aan lagu ciyaarin hadana wajiga loo sameeyay ma ahan mid gabi ahaanba isaga u muuqaal eg.
EA Sports ayaa hore u dhageysatay cabashada xiddigaha sida Jesse Lingard iyo Wilfried Zaha laakiin waa inay sidoo kalena xaliyaan Axel Witsel.